BSCI YAKAWEDZERA AUDITI YAKABUDISWA UYE YAPASWA PAMUSI wa5
ne admin pane 21-03-15
BSCI 2021 inotevera kuongorora kwakaitwa musi waMarch 3, 2021 mufekitori yedu. Mushure mezuva rakabatikana rekuongororwa kwefekitori, Yuancheng Auto Mugadziri Co, Ltd. yakapfuudza kuongororwa kweimwezve nguva.SGS yakaburitsa kopi nyowani yeBSCI 2021 kwatiri. Uye rino ndiro gore regumi isu tapasa iyo BSCI odhita. BSCI fekitori ...
Iyo girazi gwapa ndeye ramangwana kushaya simba
ne admin pane 20-11-05
Nan Yang girazi FG506 main future contract contract yadonha nhasi, kuvhura mutengo 901 yuan / ton, yakakwira 904 yuan / ton, yakaderera mutengo 888 yuan / ton, yakavharwa pa895 yuan / ton, yapfuura yekutengesa zuva rekuvhara mutengo wakadonha 9 yuan / ton , vhoriyamu 413570, kudzora yapfuura zuva rekutengesa 133700, 387976 ruoko ho ...
Kubudirira kweChina girazi indasitiri
Sezvo nyika dzichienda kugirazi indasitiri simba rekuchengetedza uye kudzikisira kusvibiswa, huwandu hwakawanda pasi pekutarisisa kwepamusika kwezvakasiyana zvekushushikana kuri kukura. Parizvino, vazhinji vevashambadziri uye vanhu vebhizinesi vanoziva nezve girazi indasitiri ishoma, sekushanya kwazvino kudzika kwe ...
Yakasimba Yuancheng: Uya zvakare
Musi waOctober 15, yegumi nematanhatu yeCanton Fair yakatanga sezvakarongwa. Yuancheng Auto Accessories Mugadziri CO., LTD yakaonekwa chitarisiko chitsva neanovel chigadzirwa lineup. Iyo nyowani yemavara inoshandura zuva mumvuri uye mudhiraivho kavha nhevedzano, iwo akanyanya kutengesa echinyakare zuva mumvuri akateedzana, iyo nyowani mota firiji ...
Chii chakaunzwa Yuancheng ku125th Canton Fair?
Musi waMay 5, chikamu chechitatu che125th Canton Fair yave kuda kuvhara. Boan yeYancheng ye4.2F16-18 ichiri kuzara nevashanyi. Semunhu anogara achiratidzira weCanton Fair, Yuancheng airatidzira dhizaini yazvino yekusevha vhiri nhevedzano, zuva rakateedzana, matenga edenga remotokari akateedzana uye mota refrige ...
Kukoka kwe2019 125th Canton Fair
Vanamai & Vanababa, Ndatenda zvikuru nerutsigiro rwenyu rurefu kuZhejiang Yuan Cheng Auto Accessories Kugadzira Co, Ltd. Tichaenda ku255 Canton Fair uko zvigadzirwa zvinotengesa zvinopisa uye zvinhu zvichangogadzirwa zvicharatidzwa kune vatengi. Tinotarisira nomwoyo wose kushanya kwako ku ...
Kudonha kushoma munaNovember mugirazi rakapetana
Webhusaiti yekambani yenyika yekuvandudza uye yekuvandudza, munaNovember, iyo yesimende yenyika yakabuda ne1.1, zvichienzaniswa nekukura kwe8.9; Flat girazi kugadzirwa rakadonha ne6.7, 14.4 yekukura pamusoro wakafanana mwaka wapera.
Girazi yenguva pfupi-yemusika musika chiyero
Zvinoenderana nekutarisisa, kumabvazuva kweChina, jiangsu HuaErRun 5 mm inoyerera girazi fekitori mutengo kune 1224 yuan / tani; In kuchamhembe China, hebei chengetedzo 5 mm kuyangarara girazi fekitori mutengo kusvika 1032 Currencykuva / tani. Munguva pfupi yapfuura musika wegirazi urikumhanya mushe, nekuti watove muna Zvita, nguva dzapfuura maererano netsika ...
Girazi semi-yegore mushumo
Inoyerera girazi yekugadzira girazi inotanga kazhinji kusara kumashure kwekuchinja kwemutengo, saka nepo mitengo ichiderera asi ichitanga kana kusadzika, kumhanya kwechibvumirano chekupa kana munguva pfupi kushoma pane kumhanya kwekudonha kwekuda, kuwanda kungangoenderera kuenda kumusoro. Asi semhedzisiro yegirazi rinoyangarara ...
Girazi rebound harigone
Girazi ramangwana rakasimba kusimuka zvakare, zvibvumirano zve1609 kubva pasi pe973 yuan / ton, yakadzokororwa kune ichangopfuura yakakwira ye1060 yuan / ton, kumusoro ingangoita 9%. Munguva yepakati, zvakadaro, iyi wave yekudzokorodza zvibvumirano zve1609 isingagadzirisike, gare gare mu930-930 yuan / ton renji oscillation yemukana wakakura. Iyo sp ...
Inotakurika Mota Inotonhorera 12v, 12v Mota Firiji Kutonhora, Yakakurumbira Car Roof Tent, Mota Waini Inotonhorera, Vhara Pasi Pemotokari, Mako Mota Inotonhorera,